Laser nokuveza Sublimation mbatya, Fitness Clothing, Digital Printed Apparel - Wuhan Golden Laser Co., Ltd
Laser nokuveza Sublimation mbatya, Fitness Clothing, Digital Printed Apparel
Vision Laser Kucheka nokuti Sublimation Apparel Industry
High nokukurumidza Flying tarisei munhu sublimated rwakapetwa rejira uye kufungawo chero shrinkage kana kusarurama kuti zvingaitika munguva sublimation kwacho uye zvakarurama richivezwa chero mazano.
Dhayi-sublimation Trend ari Driving Fashion, Fitness uye Sports Clothing Industry.
Apparel uye zvishongedzo kuti fashoni-mberi, pamusoro-muitiro panguva iyoyo hwomutambarakede uye dzichipfekeka kwagara vakatevera. Sublimated zvipfeko rinopa zvose uye zvakawanda.
The kudiwa akasiyana unhu uye mufashoni pfungwa iri zvipfeko indasitiri kwakaita zvikuru zvinobatsira sublimation zvipfeko. Kwete chete chimiro indasitiri asi kunyange activewear, gym zvipfeko uye mitambo nguvo uyewo yunifomu maindasitiri atora nezvaanoda kukuru ichi itsva dhayi-sublimation pakudhinda unyanzvi sezvo inopa mikana yakakura nokuda customization pamwe chepakarepo hapana akazvigadzira nezvatisingagoni.
mutengi Wedu showroom
Laser nokuveza dhayi-sublimation rinodhindira
Laser nokuveza ndiyo inonyanya kufarirwa nokuveza mhinduro kuti mbatya indasitiri. Sezvo aitungamirira Laser nokutengesa nokuda Whitehead Textile maindasitiri, Golden Laser yakatanga mukuru nokukurumidza chiratidzo Laser nokuveza marongedzero pamusoro nokukurumidza nokuveza sublimation micheka iri mabhanzi kwaita. Chaiparira utsanzi, Golden Laser nguva dzose anotarira kusika kunonyanyisa kukosha kuti vatengi dzedu.
Typical Laser fomu sublimation mbatya
Jersey (Basketball Jersey, nhabvu Jersey, yebaseball Jersey, hockey)
Dance kusakara / Yoga kusakara
Laser nokuveza sublimation akadhindwa mbatya
The CHIRATIDZO Laser Chekai hurongwa automates muitiro kuzvicherera dhayi sublimation yakadhindwa zvidimbu rejira kana Whitehead Textile nokukurumidza uye zvakarurama, compensating chero nokumonyaniswa uye anotambanudza kuti kuitika kusagadzikana kana stretchy Textiles sezvinoita vaya vaishandisa mbatya.
Laser nokuveza dhayi-sublimation Hockey Jersey
0.5mm kutema zvakarurama
yakaderera rechengetedzo mari
Dzidza zvakawanda pamusoro zvaakaratidzwa Laser aricheke
Laser nokuveza sublimated activewear
CHIRATIDZO Laser Cut rakanakira kutema mbatya zvikurukuru nokuti anokwanisa rayo kucheka stretchy uye nyore akavhiringika zvokuvakisa - chaizvo mhando kuti awane ne mitambo zvipfeko (eg Chikwata Jerseys, swimwear etc.)
Ndezvipi zvakanakira Laser nokuveza?
- Vose automatic, zvishoma mutengo
Kucheka mucheto mhando
Kwete, nokuti contactless Laser kugadzira
SEI CHIRATIDZO Laser Cutter NEMABASA?
BASA Mode 1
→ atarise ON nhunzi
Gadzirisa rose kugadzirwa rikurumidze. Automatic nokuveza nokuti mupumburu micheka
Ponesai turusi uye basa mutengo
High goho (500 anoita Jersey pazuva paminiti kusuduruka - chete bhuku)
No waiti chepakutanga Graphics mafaira
BASA MUENZANISO 2
→ atarise Registration mavanga
For munyoro zvinhu nyore kuti vasataura, curl they vatiitire
For yakaoma muenzaniso, nesting muenzaniso mukati rehurukuro uye yakakwirira nemazvo nokuveza zvinodiwa
Ndezvipi Vision Laser System Advantages?
HD maindasitiri Camera
Cameras atarise rejira, zvikavengwa kuziva akadhindwa gandiwa, kana kuzviona kunyoresa mavanga uye kucheka vakasarudzwa mazano nokukurumidza uye kururama.
Namazvo Laser nokuveza
nokuveza yakarurama panguva kumhanya. Zvakachena uye chakakwana akavezwa micheto - hapana reworking pakati nokuveza zvidimbu zvakakodzera.
The Vision Laser Hurongwa rwoga compensates chero nokumonyaniswa kana anotambanudza chero jira kana Textiles.
Chinogara chichingoitwa kugadzira
Conveyor maitiro uye motokari feeder kuti zvakazara-otomatiki Laser kubudiswa zvakananga kubva roll.
Tinoratidza zvinotevera Laser nehurongwa
nokuti digitaalinen rakadhindwa mbatya indasitiri:
Golden Laser ave chaizvo Akaongorora kubudiswa zvinodiwa mune mbatya, uye yakatanga dzakatevedzana zvoga Laser kubudiswa zvinogadzirisa kuvandudza kubudiswa kunaka mbatya, inoita kurimwa muitiro nyore, anoponesa yakawanda basa uye nguva mutengo.
Golden CAD Vision kushanda pakuvheneka Laser Cutting Machine
Golden Cam Camera kunyoresa Laser Cutter Machine
High Speed ​​Galvo & Gantry Laser Perforating uye Cutting System
"Hapana chinhu nokukurumidza kupfuura muchina uyu hapana kuri nyore pane muchina uyu!"
Tine zvakakwana Laser kubudiswa michina, kusanganisira Laser nokuveza, Laser achiita zvokutemera, Laser perforating uye Laser chokuguma.
Find yedu Laser michina
Zviongorore zvinhu zvenyu, optimize muitiro, zvinopa video, kubudiswa parameters, uye zvakawanda, mahara.
Kudzamisa zvinodiwa maindasitiri pamwe zvoga uye noungwaru Laser chikumbiro mhinduro kubatsira vanoshandisa innovate uye kukudziridza.